I-G10 Glass Fiber Plate engu-2.0x400X500mm China Manufacturer
Incazelo:Amapuleti we-G10 Glass Fibre,I-G10 Glass Fiber Sheet 2.0mm,400x500mm G10 Ingilazi yefilitha
Home > Imikhiqizo > Ikhabethe le-Carbon Fibre > Ishidi le-G10 Glass Fibre > I-G10 Glass Fiber Plate engu-2.0x400X500mm
I-G10 Glass Fiber Plate engu-2.0x400X500mm
CG10 Glass Fibre ipuleti engu-2.0x400X500mm
Ishidi le-G10 Glass fiber liyi-thermosetting laminate yezimboni equkethe ingilazi yefilimu eqhubekayo
Indwangu yendwangu ene-epoxy resin binder. Ishidi le-fiber ye-G10 Glass linezimpawu zamandla aphezulu,
izakhiwo ezinhle kakhulu zikagesi nokumelana kwamakhemikhali hhayi kuphela emazingeni okushisa asekamelweni kuphela kepha futhi ngaphansi kwezimo ezinomswakama noma zomswakama.
Ukucaciswa kweshidi le-fiber Glass Glass :
Indwangu: I-Glass Fibre
Ubukhulu: 1mm / 2mm / 3mm / 4mm / 5mm
Olunye usayizi lungaba ngezifiso
Sinezimpahla eziningi ezimnyama ze- G10 Glass Fiber esitokisini. Usayizi oshisayo 400x500mm G10 Ingilazi yefrimu kwesitoko.
Ubunzima obungu-1.0mm, u-2.0mm, ongu-3.0mm, ongu-4.0mm kwakuyizimpahla ezijwayelekile.
Uma ungathanda ukufaka i-ligher impahla ye-fpv noma i-drone, sineshidi eligcwele le-carbon fiber esitokweni.
Uma unesibalo esikhulu samandla sine-toray t700 egcwele i-carbon fiber sheet esitokisini.
Noma yikuphi ukungenela ku-pls zizwe ukhululekile ungazise.
Okwamanje sinolunye futhi olukhethiwe, ishidi lephepha lekhabhoni .
Vele usho isidingo sakho sizokunikeza isiphakamiso sobungcweti.
Izigaba zomkhiqizo : Ikhabethe le-Carbon Fibre > Ishidi le-G10 Glass Fibre
I-G10 Glass Fiber Plate engu-2.0x400X500mm Xhumana Nanje
Ama-sheet ka-G10 e-glass fiber plates amashidi 2mm 3mm 4mm Xhumana Nanje
Amashidi we-F10 we-G10 we-Glass eyenziwe ngokwezifiso Xhumana Nanje
I-400x500mm G10 Glass Fiber Sheets 2.0mm / 3.0mm / 4.0mm Xhumana Nanje
I-Epoxy resin G10 sheet eliqinisiwe ingilazi / ibhodi Xhumana Nanje
I-G10 400X500 1.5mm Ubuncane be-Glass Fiber Plate / Ishidi / Ibhodi Xhumana Nanje
I-Laminate fr4 Epoxy G10 Ingilazi le-Glass Sheet Material Xhumana Nanje
I-G10 Glass Fiber Board eyenziwe ngokwezifiso / Ishidi / ipuleti Xhumana Nanje
Amapuleti we-G10 Glass Fibre I-G10 Glass Fiber Sheet 2.0mm 400x500mm G10 Ingilazi yefilitha Ipuleti le-G10 Glass Fibre Amashidi we-G10 Glass Fibre Ipuleti le-Glass Fibre Amapuleti we-3K Fibre Amapuleti we-100% weCarbon Fibre
Amapuleti we-G10 Glass Fibre I-G10 Glass Fiber Sheet 2.0mm 400x500mm G10 Ingilazi yefilitha Ipuleti le-G10 Glass Fibre Amashidi we-G10 Glass Fibre